Onye na -emepụta ụgbọ ala na ndị na -ebubata ụgbọ elu nke China | Daxin
Ụgbọ ala na-arụ ọrụ elu nwere uru nke ngwa ọrụ ikuku ndị ọzọ enweghị ike iji tụnyere, ya bụ, ọ nwere ike rụọ ọrụ dị anya ma na-agagharị agagharị, na-esi n'otu obodo gaa n'obodo ọzọ ma ọ bụ ọbụna mba. Ọ nwere ọnọdụ enweghị atụ na arụmọrụ ọchịchị.
Ogologo Max Platform: Ogo nke 10-26 m
Ike iche: 200kg
Ike kreenu: 1000kg
Inye mkpuchi mbupu oke osimiri dị
Oge akwụkwọ ikike ọnwa 12 nwere akụrụngwa mapụtara n'efu
Ezigbo Ngosipụta Foto
A na-ejikarị ụgbọ ala arụ ọrụ dị elu arụ ọrụ dị elu dị ka ọkụ eletrik, ọkụ n'okporo ụzọ, ọchịchị ime obodo, ubi, nkwukọrịta, ọdụ ụgbọ elu, iwu ụgbọ (nrụzi), njem, mgbasa ozi na foto. Iji nye nkwado arụmọrụ maka ubi ndị ọzọ, ụlọ ọrụ anyị nwekwara ugbo ala pụrụ iche maka ọrụ ịgba ọkụ. Ulo elu ikuku nwere ọdụ mgbapụta dị elu nke na-eme ka usoro mbuli elu kwụsie ike, na n'otu oge ahụ ọ nwere ikike siri ike imeri ihe mgbochi. Ọ bụrụ na ị nwere obere mpaghara ọrụ, anyị nwere ndị ọzọngwaahịa ịhọrọ site na. Biko zitere m ajụjụ ozugbo ị họọrọ akụrụngwa kwesịrị ekwesị, m ga -enyekwa gị nkọwa zuru ezu.
Ajụjụ: Ọ dị mma ịtụgharị ogwe aka apịachi n'oge ọrụ?
Ụgbọ ala na-arụ ọrụ dị elu nwere ntụgharị nke nwere ike ịtụgharị 360 Celsius, na-ejikọ usoro mbubata turbine na mmanu mmanu na mkpọchi onwe ya, enwere ike ịhazigharị ọnọdụ mkpọchi ya iji nweta mmetụta achọrọ.
Ajụjụ: Kedụ ka m ga -esi mụtakwuo gbasara data ahụ?
A ： Ị nwere ike pịa ozi -e na ibe ngwaahịa a ka iziga anyị ozi ozugbo, ma ọ bụ ị nwere ike pịa “Kpọtụrụ anyị” na webụsaịtị ka ị nweta ozi kọntaktị ọzọ, wee họrọ usoro ịchọrọ ịkpọtụrụ anyị maka ozi ngwaahịa.
Ajụjụ: Kedu maka ọnụahịa ngwaahịa gị?
A: Ụlọ ọrụ mmepụta anyị eguzobela ọtụtụ ahịrị mmepụta, nke nwere ike rụọ nnukwu mmepụta ahaziri iji belata ọnụ ahịa mmepụta anyị, yabụ ọnụahịa anyị bara ezigbo uru.
Ajụjụ: Ogo ngwaahịa gị a pụrụ ịtụkwasị obi?
A: Ngwaahịa anyị agafeela asambodo EU, na ịdị mma nwere ike ịtụkwasị obi kpamkpam.
Onye ahịa anyị nke German nwere ụlọ ọrụ mgbazinye nke ya wee zụta ụgbọ ala anyị dị elu maka mgbazinye. Site na nkwukọrịta, ọ gwara anyị na mgbazinye ụgbọ ala ọrụ ụgbọ elu na -ewu ewu n'ihi na ọ dị mfe ịkwaga na saịtị ọrụ dị iche iche. Ndị na -azụ ya na -amasị akụrụngwa a nke ukwuu, o wee kpebie ịzụta ọzọ. Ọ gwara anyị na ha na-ejikarị ụgbọ elu dị elu arụzi na idobe ụfọdụ ụlọ dị n'èzí. Mgbe ọ zụrụ ngwaahịa anyị ọzọ, anyị nwere ụfọdụ ego maka ndị enyi ochie anyị, na -enwe olileanya na ọtụtụ ndị ahịa ga -enwe mmasị na ụlọ ọrụ mgbazinye ya.
Otu n'ime ndị ahịa anyị nọ na Dubai azụtala ụgbọ ala ọrụ ụgbọ elu anyị ka a ga -eji ya rụọ ebe a na -adọba ụgbọala iji megharịa ụgbọ ala Scrap. Ebe ha na -eji gwongworo a na -arụ ọrụ, ha nwere ohere ugbu a n'ogige a gbahapụrụ agbahapụ. O jiri ngwa a dobe ụgbọ ala ndị eji eme ihe. O doro anya na ịdị elu a dị elu karịa ka ọ dị na mbụ, ọrụ ndị ọrụ ya dịkwa mfe. Obi dị anyị ezigbo ụtọ ịnụ na akụrụngwa anyị na -eme ka ọ dị mfe.
Ịdị elu nke ikpo okwu (m)
Ike Platform (n'arọ)
Max nko elu (m)
N'akuku ntụgharị (°)
360 bothway & na -aga n'ihu
Ike nko (n'arọ)
Ewepụghị arọ (n'arọ)
N'ozuzu size (mm)
Isi ụkwụ ụkwụ (mm)
Ụkpụrụ Emission CHINA
Ọsọ kacha (km/h)
Axle ikike (n'arọ)
Ogologo ogologo (mm)
Akuku nkuzi (°)
Nke gara aga: Trailer Ịnyịnya
Osote: Ụgbọ ala ọgụ ụfụfụ
1.Good kwụsie ike dị mma na ụdị H ụdị na uwe maka ụdị ọrụ ọ bụla.
2.High mma mgbapụta ọdụ na -eme ka ọ bulie ma daa nke ọma.
3.Anti-tuo mkpa isi; isi ntụtụ mpịakọta na-ewepụta ihe na-ete onwe ya nke na-agbatị ogologo ndụ.
4.Ekwuru ya na ngọngọ eletriki eletriki eletriki arụnyere ịrụ ọrụ dị mfe.
5.Pap valve enyemaka na -egbochi imebiga ihe ókè; Valve control valve na -eme ka a na -agba ọsọ ọsọ ọsọ.
Valve mgbawa mgbawa na-akwụsị ikpo okwu na-agbada ngwa ngwa mgbe ọkpọkọ dara.
7.Dị ka ọkọlọtọ ANSI/ASME na ọkọlọtọ Europe EN1570
1, A na -eme mkpọtụ na ụkwụ nke profaịlụ Q345 dị ala, enweghị weld, ọdịdị mara mma, ike, ike dị elu;
2, nkwụsi ike ụkwụ, ụkwụ nwere ike rụọ ọrụ n'otu oge ma ọ bụ iche, ọrụ na-agbanwe agbanwe, nwere ike imeghari n'ọnọdụ dị iche iche;
3, usoro ịkwa akwa na -agbanwe agbanwe, ọ dị mfe idozi;
4, okpokoro rotary ụzọ 360 ° ntụgharị, iji usoro irighiri ihe dị elu nke ikpuru (yana iji mmanụ na-egbu onwe ya na ọrụ mkpọchi onwe ya), mmezi post nwekwara ike ịhazigharị ọnọdụ bolt ka ọ dị mfe nweta nsonaazụ achọrọ;
5, Ọrụ ụgbọ ala na -eji ọnọdụ mgbochi njikwa valvụ njikwa, okirikiri nhọrọ ukwuu, ọrụ kwụsiri ike, mmezi dị mfe;
6, Bilie banye na njikọ ụgbọ ala, ọrụ nchekwa na ntụkwasị obi;
7, Ụgbọ ala na -arụ ọrụ site na valvụ mgbachi iji nweta ọsọ Nkwa;
8, ikpo okwu ọrụ na -eji ọkwa arụ ọrụ, kwụsie ike ma nwee ntụkwasị obi;
9, Ntughari na nkata na mmalite na nkwụsị ọkụ, dị mfe iji rụọ ọrụ, chekwaa mmanụ
1. valvụ mgbawa
2. valvụ spillover
3. valvụ mbelata mberede
4. Ngwa mkpọchi nchedo oke.
5. valvụ mbelata mberede
6. Ngwa mkpọchi nchedo oke ibu.
1. A ga -atụ aro gị ụdị kacha dabara adaba ozugbo anyị matara maka ihe ị chọrọ.
2. Enwere ike ịhazi mbupu site n'ọdụ ụgbọ mmiri anyị ruo n'ọdụ ụgbọ mmiri ị na -aga.
3.Opetion vidiyo nwere ike izitere gị ma ọ bụrụ na achọrọ.
4. A ga -enye vidiyo mmezi ozugbo igwe mkpagharị na -ebuli ikpo okwu iji nyere gị aka rụzie.
5.Parts nke ụgbọala nwere ike zitere gị site awara awara n'ime 7 ụbọchị ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Ọnụ ego gwongworo ụgbọ elu
Ọnụ ego ụgbọ ala na -arụ ọrụ
Ọnụ ịwụ gwongworo
Ụgbọ ala ọrụ Alritude dị elu
Ọnụahịa ụgbọ ala dị elu
Ọnụahịa ụgbọ ala ọrụ
Ọnụahịa gwongworo pụrụ iche